အိမ်ထောင်ရေးအဆင်မပြေမှုကြုံတွေ့ရသော အမျိုးသမီးသရုပ်ဆောင်များနှင့် ရိုက်ကူးနေသည့် ‘တစ်ခုလပ်’ရုပ်ရှင် ...! - APANNPYAY
Home / သရုပ်ဆောင်များ / အိမ်ထောင်ရေးအဆင်မပြေမှုကြုံတွေ့ရသော အမျိုးသမီးသရုပ်ဆောင်များနှင့် ရိုက်ကူးနေသည့် ‘တစ်ခုလပ်’ရုပ်ရှင် ...!
အိမ်ထောင်ရေးအဆင်မပြေမှုကြုံတွေ့ရသော အမျိုးသမီးသရုပ်ဆောင်များနှင့် ရိုက်ကူးနေသည့် ‘တစ်ခုလပ်’ရုပ်ရှင် ...!
Apann Pyay 7:25 PM သရုပ်ဆောင်များ Edit
တစ်ခုလပ်ရုပ်ရှင်ဇာတ် ကားကို အိမ် ထောင်ရေးအဆင် မပြေမှု ကြုံတွေ့ခဲ့ဖူးသည့် အမျိုးသမီး
သရုပ်ဆောင်များနှင့် ရိုက်ကူးနေကြောင်း ဒါရိုက်တာညွန့် မြန်မာညီညီအောင်က ပြောသည်။
‘‘တစ်ခုလပ်ဆိုတိုင်း လူမှုပတ်ဝန်းကျင်မှာ အထင်မသေး ကြဖို့၊ နောက်ပြီး တစ်ခုလပ်ဖြစ်သွားလို့ သူ့ရဲ့ကိုယ်ကျင့်သိက္ခာကို ပိုပြီး ထိန်းသိမ်းတဲ့ မိန်းကလေးတွေရှိတယ်ဆိုတာကို ဒီကားထဲမှာ ပြထားတာပါ’’ဟု တစ်ခုလပ် ဇာတ်ကားအကြောင်းကို ပြောသည်။ အဆိုပါရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားအတွက် သရုပ်ဆောင်ရွေးချယ်မှုကို ထုတ်လုပ်ရေးဘက်ကသာ ရွေးချယ်ခြင်းဖြစ်ပြီးအဓိကသရုပ်ဆောင်များအနေဖြင့်
မျိုးသန္တာထွန်း၊ ခင်ဇာခြည်ကျော်နှင့် လင်းဇာနည်ဇော်တို့က ပါဝင်သရုပ်ဆောင်မည်ဖြစ်သည်။
‘‘အနုပညာရှင်တွေကတော့ သဏ္ဌာန်လုပ်သရုပ်တူအောင် သရုပ်ဆောင်ကြတာပဲ။ ဒါပေမဲ့ ဒီကားထဲမှာကတော့ တချို့မင်း သမီးတွေဆို ပြောတယ်။ ဇာတ် ဝင်ခန်းပြောရတဲ့ စကားတွေကို အရမ်းအားရတယ်။ သူဖြစ်ခဲ့တဲ့အကြောင်းကို ပြောနေသလိုဖြစ်နေတယ်။ အဲဒါမျိုးပြောတော့ သူတို့ ပိုပြီး Mood ရတယ်လို့ထင်ပါ တယ်’’ဟု ညွန့်မြန်မာညီညီအောင် က ပြောသည်။
အိမ်ထောင်ရေးအဆင်မပြေမှုကြုံခဲ့ဖူးသည့် မင်းသမီးများ နှင့် ရိုက်ကူးခြင်းဖြစ်သော်လည်း ၎င်းတို့၏ဘဝကို ထည့်သွင်းရိုက် ကူးထားခြင်းမရှိကြောင်း ၎င်းက ဆိုသည်။
ထို့အပြင် ယင်းဇာတ်ကား၌ တစ်ခုလပ် မင်းသမီးများအကြောင်းသာမက မိဘမဲ့ကလေးများ၏
အကြောင်းကိုလည်း ထည့် သွင်းရိုက်ကူးထားကြောင်း ညွန့် မြန်မာညီညီအောင်က ပြော သည်။ ယင်းဇာတ်ကားကို SG9 Production က ထုတ်လုပ်ရိုက်ကူး ခြင်းဖြစ်ပြီး ဇာတ်လမ်း၊ ဇာတ်ညွှန်း
သမီး မြတ်ကျော်က ရေးသားထားသည်။
တဈခုလပျရုပျရှငျဇာတျ ကားကို အိမျထောငျရေးအဆငျ မပွမှေု ကွုံတှခေဲ့ဖူးသညျ့ အမြိုး သမီးသရုပျဆောငျမြားနှငျ့ရိုကျ ကူးနကွေောငျး ဒါရိုကျတာညှနျ့ မွနျမာညီညီအောငျက ပွော သညျ။
‘‘တဈခုလပျဆိုတိုငျး လူမှု ပတျဝနျးကငျြမှာ အထငျမသေး ကွဖို့၊ နောကျပွီး တဈခုလပျဖွဈ သှားလို့ သူ့ရဲ့ကိုယျကငျြ့သိက်ခာကို ပိုပွီး ထိနျးသိမျးတဲ့ မိနျးကလေး တှရှေိတယျဆိုတာကို ဒီကားထဲ မှာ ပွထားတာပါ’’ဟု တဈခုလပျ ဇာတျကားအကွောငျးကို ပွော သညျ။ အဆိုပါရုပျရှငျဇာတျကား အတှကျ သရုပျဆောငျရှေးခယျြမှု ကို ထုတျလုပျရေးဘကျကသာ ရှေးခယျြခွငျးဖွဈပွီး အဓိကသရုပျ ဆောငျမြားအနဖွေငျ့ မြိုးသန်တာ ထှနျး၊ ခငျဇာခွညျကြျောနှငျ့ လငျး ဇာနညျဇျောတို့က ပါဝငျသရုပျ ဆောငျမညျဖွဈသညျ။
‘‘အနုပညာရှငျတှကေတော့ သဏ်ဌာနျလုပျသရုပျတူအောငျ သရုပျဆောငျကွတာပဲ။ ဒါပမေဲ့ ဒီကားထဲမှာကတော့ တခြို့မငျး သမီးတှဆေို ပွောတယျ။ ဇာတျ ဝငျခနျးပွောရတဲ့ စကားတှကေို အရမျးအားရတယျ။ သူဖွဈခဲ့တဲ့အကွောငျးကို ပွောနသေလိုဖွဈနတေယျ။ အဲဒါမြိုးပွောတော့ သူတို့ ပိုပွီး Mood ရတယျလို့ထငျပါ တယျ’’ဟု ညှနျ့မွနျမာညီညီအောငျ က ပွောသညျ။
အိမျထောငျရေးအဆငျမ ပွမှေုကွုံခဲ့ဖူးသညျ့ မငျးသမီးမြား နှငျ့ ရိုကျကူးခွငျးဖွဈသျောလညျး ၎င်းငျးတို့၏ဘဝကို ထညျ့သှငျးရိုကျ ကူးထားခွငျးမရှိကွောငျး ၎င်းငျးက ဆိုသညျ။
ထို့အပွငျ ယငျးဇာတျကား၌ တဈခုလပျ မငျးသမီးမြားအ ကွောငျးသာမက မိဘမဲ့ကလေး မြား၏အကွောငျးကိုလညျး ထညျ့ သှငျးရိုကျကူးထားကွောငျး ညှနျ့ မွနျမာညီညီအောငျက ပွော သညျ။ ယငျးဇာတျကားကို SG9 Production က ထုတျလုပျရိုကျကူး ခွငျးဖွဈပွီး ဇာတျလမျး၊ ဇာတျညှနျး သမီး မွတျကြျောက ရေးသားထား သညျ။